Chipatara chekumaodzanyemba - Shenzhen Doneax Science uye Technology CO., LTD
Yakagadzwa muna 1941, Chipatara cheSouth ndicho chekutanga chakabatana chipatara uye yekutanga kiriniki yekurapa yekuSouthern Medical University (yaimbova yekutanga Medical Medical University). Icho chihombe-chikamu chakazara cheGrade 3A chipatara chinosanganisa kurapwa, kudzidzisa, kutsvagisa kwesainzi nekudzivirira uye hutano hutano. yekutanga batch yezvipatara zveParknShop munyika.
Kune mibhedha mazana maviri nemakumi maviri neshanu muchipatara, uye makosi makumi mashanu nemaviri emitambo akaiswa muchipatara. Yekutanga-tier kurangwa kwemakiriniki mushonga ndiyo mvumo nzvimbo yechiremba degree uye chiteshi chekuyerera che postdoctoral research. Yemukati mishonga (yekugaya system zvirwere) ndiyo yenyika kiyi kuranga, uye kuvhiya (orthopedic) ndiyo yenyika kiyi kuranga. Dhipatimendi reGastroenterology, Gynecology, Obstetrics, Orthopedics, Laboratory Medicine, Pathology, Hematology, Neurosurgery, Stomatology, Nephrology, General kuvhiyiwa, Oncology, hutachiona Mishonga, kuvhiya kwepurasitiki inyanzvi dzekiriniki yenyika, ine 31 kiriniki kiyi hunyanzvi muPurovhinzi yeGuangdong. Iyo ine State kiyi yeLabhoritari yekuDzivirira uye kurapwa kweOrgan kukundikana uye yeNational Clinical Medical Research Center yezvisingaperi Zvirwere Zvirwere. Chipatara chakatungamirawo mukumisikidza "Health Management demonstration Base", "Li Kezhong Medicine academic School heritage Base" uye "Medical Centre yeZvakaoma uye yakaoma Zvirwere zveAkare Chinese Chinese Medicine" munyika yese. Guangdong Institute yeNephrology uye Southern Institute yeDigestive Zvirwere zvakasimbiswa.
Chipatara chakaumba zvisere zvemakiriniki anobatsira minda yekuongororwa uye kurapwa kwezvirwere zvekugaya, chirwere cheitsvo, hepatitis, mushonga wepenatal, kuongororwa kwakazara uye kurapwa kwemamota, kurapwa kwekushungurudzika, microneurosurgery uye nyama uye kuisirwa nhengo, pamwe neane hunhu hwehunyanzvi hwekurapa mapuratifomu e stem cell therapy, zvishoma zvinokanganisa endoscopic kuongororwa uye kurapwa, kupindira kuongororwa uye kurapwa uye kurapwa kwezvirwere zvakanyanya uye zvakakomba.